Uma udlala "Varfeys", kufanele wazi ukuthi kuyinto PTS. Lena iseva ekhethekile eyehlayo isinyathelo kuphela uma ulungela alandelayo update enkulu umdlalo. Ngakho, kule seva test lapho abadlali ungazama Gameplay izinto ezintsha ngisho nangaphambi kokuba ngokusemthethweni bayokhululwa. Njengoba ungacabanga, lokhu iseva akuyona enkulu negcwele - uklanyelwe kuphela ukuhlola izici ezintsha, ngakho awunawo amandla efanayo amaseva ezivamile. Lokhu kusho ukuthi-ke angazamukela inani elithile labantu kuphela, ngakho-ke kudingeka balungiselele ukwethulwa, ukuba phakathi kuqala. Ukuze wenze lokhu uzodinga ukwazi eminye imininingwane inqubo - isibonelo, indlela ukukopisha umlingisi "Varfeyse" ku-PTSD, njengoba kuyisinyathelo esibalulekile kakhulu, futhi uma ungenalo ukubhekana naso, ungakwazi ulahlekelwa ithuba.
Ifaka iseva test
Ngaphambi esibhekana nazo ukuthi, indlela ukukopisha umlingisi "Varfeyse" we-TCP, kudingeka ukuxazulula inkinga eyisisekelo. Ngokwesibonelo, udinga ukuthola ukuhlolwa iklayenti ekhethekile, elizoquketha zonke ezintsha. Ukuze uthole it, udinga ngokushesha ukulanda inguqulo ebuyekeziwe ye-Game Center, okuyothi ngokuvamile ukusebenzisa "Varfeys". Khona-ke, phakathi nendawo ungathola isixhumanisi ukuze iklayenti efanayo udinga ukulanda kwikhompyutha yakho. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ukuthi ungakwazi ukusebenzisa iseva test bese uzama ukuthola kuso. Kodwa yiso kanye kulolu futhi udinga ukwazi ukuthi ukukopisha umlingisi "Varfeyse" TCP ukuthola ithuba lokudlala futhi ukuhlola izici ezintsha.
Ngakho, uma ufuna ukufunda indlela ukukopisha umlingisi "Varfeyse" ku-PTSD, khona-ke udinga ukuya I-akhawunti yami bese ubheka khona ezohlukaniswa. Kuzoba idatha eziningi ezahlukene kanye inkinobho wena nesithakazelo. Kuyinto unesibopho nokudluliswa uhlamvu lwakho, ngakho uzizwe ukhululekile chofoza kukho bese ulinda kuze uzokwazi ukusebenzisa umdlalo futhi ukuqala ukuhlolwa. Ngakho kahle e "Varfeys" PTS - ukopishe uhlamvu ungakwazi kakade cishe ngamehlo akho ivaliwe.
Nokho, abadlali abaningi baye bakhononda ukuthi shake inkinobho kubonakala, kodwa akwenzeki lutho - uhlamvu yabo engafuni kukopishelwe TCP. Yini okumelwe uyenze? Ngayiphi kungenzeka imbangela yale nkinga? Empeleni, konke ulula - zikhona izimo ezithile ukuthi kudingeka silandele ukuze bakwazi ukuthola on the server test. Okokuqala, ungahambisa ngohlamvu olulodwa kuphela, ngakho uma uzama ukopishe yesibili ke ungatholi ukukwenza. Okwesibili, uhlamvu yakho kufanele kakade wazibonela - ezingeni layo akufanele ibe ngaphansi wamashumi amane. Kuphela uma bonke nale mibandela, uyokwazi ukuthutha uhlamvu wakho ukuze TCP. bese uqale umdlalo amaklayenti ezintsha bese uqala ukuhlola izici olusha ukusiza hero yakho. Ngemuva kokuthi kahle ebuntwini. PTS "Varfeys" manje ngokugcwele ngaphansi kokulawula kwakho.
Sizwelana indlela yokwenza enezidleke zezinyosi e "Maynkraft"
"Dot", abaphathi: ukuqondisa kukhethwa izinhlamvu
Amapaki Water e-Ukraine: ukubuyekeza yezinto ezithakazelisa kakhulu
Lungiselela i-Skype? Kulula kanjalo nje!
Imijovo yokugoma ngokumelene upokisi ingane: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo (ukubuyekezwa)
Indlela yokwenza okhalweni mncane
Indlela ukususa ukuvikelwa kudiski